Buy HOUSE RENT IN SHWE HNINSI (ID-1156) (67Lks) in မရမ်းကုန်း on ipivi.com
HOUSE RENT IN SHWE HNINSI (ID-1156)
2 Stories house for rent in Shwe Hninsi , Mayangone Township. Land area - 11000 sqft. House area - 1600 sqft. House has generator. Open car parking space.
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊ ရွှေနှင်းဆီလမ်းရှိ ငှားရန်ရှိသော နှစ်ထပ်တိုက်လုံးချင်းအိမ်ဖြစ်ပါသည်။ မြေအကျယ် - ၁၁၀၀၀ စတုရန်းပေရှိပြီး လုံးချင်းအိမ်အကျယ် - ၁၆၀၀စတုရန်းပေရှိပါသည်။ မီးစက် ထည့်သွင်းပါရှိပါသည်။ ခြံဝင်းအတွင်း ကားထားရန် နေရာကျယ်ရှိသည်။ လုံးချင်းအိမ်၏ လစဉ်ငှားရမ်းခဈေးနှုန်း - ဒေါ်လာ၅၀၀၀ (ညှိနှိုင်း)။
အမည်: HOUSE RENT IN SHWE HNINSI (ID-1156)